घटनाको संयुक्त अनुगमन | Mechikali Daily
घटनाको संयुक्त अनुगमन
Posted By: मेचीकाली डेस्कon: ५ माघ २०७५, शनिबार ०२:०३
बुटवल, माघ ५ । सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. ६ का केदार साहनीको मृत्यु गैरन्यायिक हत्या भएको आशंकामा मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, जवाफदेहीता निगरानी समिति र एडभोकेसी फोरमले संयुक्त रुपमा घटनाको अनुगमन गरेका छन् ।
साहनीको गत शनिबार राति प्रहरीको जवाफी कारवाहीमा मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको थियो । यद्यपि साहनीका परिवारले जवाफी कारवाही नभएको बताएको छ । साहनीकी आमा मुराती चाईले पक्राउ गरेर प्रहरीले गोली हानेर मारेको बताउनुभयो । आमा चाईले साहनी यसअघिको मुद्धामा कैद सजाय भुक्तान गरी भारतको केरलामा बस्दै आएका र सबैकुरा आफूहरुलाई थाहा नभएको बताउनुभयो ।
यता प्रहरीले भने सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. १० शंकरपुरमा प्रहरीको गस्तीलाई एक्कासि फाइरिङ गरेपछि प्रहरीको जवाफी कारवाहीमा मृत्यु भएको बताएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक हृदय थापाले साहनीले प्रहरीलाई एक्कासि फाइरिङ गरेपछि जवाफी कारवाहीमा मृत्यु भएको बताउनुभयो । प्रहरीले त्यसरी मृत्यु भएको व्यक्तिको पहिचान गर्नसमेत समय लागेको बताउँदै पछि मात्रै पहिचान खुलेको दावी उहाँले गर्नुभयो ।
मावन अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय वरिष्ठ उपसभापति गोबिन्द खनालले साहनीको गैरन्यायिक हत्या भएको आशंकामा एथार्थ बुझ्नका लागि अनुगनम गरिएको बताउनुभयो ।